> Household wear>OPEN GLASS DOOR WARDROBE
Full height open glass door wardrobe with 1 hanging rod and2adjustable shelves. နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့် ဗီရိုဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၂)စင်ပါဝင်သည်။ Size: W91.4*D56*H182.9 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၉၁.၄၊ အနံ ၅၆၊ အမြင့် ၁၈၂.၉ စင်တီမီတာ3type of glass available (mirror, frosted or normal ) (မှန်အကြည်၊ မှန်အနောက်၊ ကြည့်မှန်) တံခါးများရရှိနိုင်ပါသည်။